Wedzera kodhi ine anopfuura mana manhamba pane yako Apple Tarisa | Ndinobva mac
Wedzera kodhi ine anopfuura mana manhamba pane yako Apple Watch
Imwe yesarudzo yatinayo muApple Watch kuti tizvidzivirire kubva pane zvisingabvumirwe kuwana ndeyokuwedzera password yakareba, ine anopfuura manhamba mana ayo anowedzera pakutanga. Isu tiri pachena kuti zvingaite senge zvinonetesa kuwedzera mamwe manhamba kuApple Watch yekutanga password, asi funga izvozvo Iwe unongoisa chete password iyi kamwe pazuva pazuva zvakapetwa kaviri Haufunge here kuti zvakakosha?
Zvakanaka, hongu iwe uri mumwe wevaya vanofarira kuve nemadhijiti mana mu password yeApple Watch yako nekuti haufanire kuenderera uchiverenga iyi diki dzidziso, kune avo vanoda kuchinja izvi wedzera imwezve poindi yekudzivirira kumawachi edu isu tinofanirwa kutevera mashoma mashoma matanho.
Chinhu chekutanga kuwana maSystem kubva pawachi pachayo. Hongu, kwenguva yakareba zviito zvakawanda zvakaitwa kubva pawachi pachayo uye iyo iPhone haina kudikanwa. Saka takapinda Zvirongwa> Code uye uncheck "Rakareruka Kodhi" sarudzo. Iye zvino tinofanirwa kuisa password yeedu mana manhamba eApple Watch tobva tapinda nyowani kaviri.
Nezve izvi zvatove zvese zvakagadziriswa uye zvakagadzirira nguva inotevera patinobvisa wachi Izvi zvinotibvunza isu kodhi yekodhi refu uye kwete manhamba mana sepakutanga. Mupfungwa iyi, dziviriro yacho yakakura uye inogona kubatsira vashandisi vazhinji kana vasiri vese, uye zvinogara zvirinani kuve nekodhi yekubatanidza ine anopfuura mana manhamba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Wedzera kodhi ine anopfuura mana manhamba pane yako Apple Watch
Kuo anoenderera mberi nekufungidzira kwake kweMac muna 2021